Mivembena ny ezaka ataon’ny governemantan’i Rosia handrara ny Telegram, sangisangian’ny mpikatroka nomerika ny sampana mpanao sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2018 5:37 GMT
Tamin'ny voalohany volana mey, nosovohan'ny mpikatroka iray ny tranonkalan'ny sampandraharaha rosiana misahana ny fanaraha-maso ny tontolo iainana ary nosoloiny ny pejy fandraisana ka nataony sary maneso ny sampan-draharaha hafa ao amin'ny governemanta miezaka ny mandrara ny Telegram
Nahavoa manoloana ny fametrahana ny lisitra maintin'ny aterineto ao amin'ny firenena, lisitry ny tranonkala sivanin'ny governemanta rosiana mihalava hatrany, ny milaza ho “Digital Resistance” (Fifaharana Nomerika) ao Rosia.
Hatramin'ny 16 avrily lasa teo, niezaka ny Roskomnadzor, sampan-draharaha rosiana mpandamina ny media ao Rosia, ny hanakana ny Telegram, servisy manana ny lazany amin'ny fandefasan-kafatra am-pinday [mg], fa eo ho eo ihany ny fahombiazan'izany. Hatramin'izay fotoana izay, nitombo na nihena imbetsaka ny lisitra mainty, ny rejisitry ny tranonkala sakanana.
Goavana ny fahavoazana mahazo ny hafa (na ny roa tonta) amin'ny fomba fiasan-dry zareo. Adiresy IP sy servisin'aterineto an-tapitrisany no nosakanana rehefa nanenjika ny servisy cloud ampiasain'ny Telegram sy vokatra maro dia maro hafa ny sampan-draharaha, hetsika izay lazain'ny sasany fa mety niteraka fatiantoka amina miliara dolara ho an'ny fihariana rosiana. Nanomboka nanaisotra adiresy tamin'ny lisitra mainty ny Roskomnadzor tamin'ny 8 mey, amin'izay azo heverina ho fanekena faharesena izany.
Nandritra ny andro maromaro izay, nanangana fitsongoan-dia eo noho eo izay mampiseho ny isan'ny adiresy IP sakanana amin'izao fotoana ao Rosia ireo mpandrafitra (habaka) mahaleotena.
Talohaloha kokoa tamin'ny 5 mey, nandrakitra toe-javatra mahavariana ny milina mpitsongodia : mitsimbadimbadika hatrany eo amin'ny 47000 sy 55000 tsy anampiana tsy analana hatrany ny fitambaran'isan'ny adiresy IP sakanana. Mpijery sahisahy no nahamarika fa fandefasana môrsa io fiverimberenan'isa io. Rehefa novakiana izany dia izao no nivoaka : “Digital Resistance.”
DIGITAL RESISTANCE, notononina tamin'ny kaody Morse // pikantsary avy amin'i roem.ru
Rehefa nanomboka niezaka hanakana ny Telegram ny Roskomnadzor tamin'ny volana avrily, dia namariparitra ny valiny i Pavel Durov, mpanorena ny Telegram — ka avy amin'izany no nahitan'ny mpikatroka maro ny lalana hanivahana amin'ny sivana — toy ny fananganana ny “Digital Resistance”.
Niely ivelan'ny serasera aterineto haingana izany fifaharana izany, ka anarivony ireo nidina an-dalambe ho setrin'ity fomba manapotika amin'ny sivana ity.
Ity hetsika farany ity dia tsy fitadiavana hisovoka na hanova ny rejisitry ny Roskomnadzor, fa kirakira tsotsotra ihany. Milaza ireo manampahaizana manokana amin'ny tekonolojia fa nisy olona naka ireo vala efa ao anatin'ny rejisitra dia avy eo nanampy sy naka adiresy IP hafa amin'ireo vala fotsiny. Raha tsy nanakana na namaha tranonkala fanampiny izany, dia lasa nanova ny famakian-tenin'ilay milina mpitsongodia manondro eo noho eo. Vokany nivoaka ny hafatra avy amin'ny kaody Morse “Digital Resistance” rehefa nojerena tamin'ilay mpitsongodia manondro eo noho eo.
Na dia noahiahiana aza tamin'ny voalohany fa tao amin'ny Roskomnadzor ihany no nanao izany, dia nandroso alohaloha kokoa ilay mpamazivazy tamin'ny 6 mey ary nanondro ny tenany ho Leonid Evdokimov. Niteny tamin'ny wikinews.ru izy fa tsy antso handray fitaovam-piadiana akory iny fa karazam-bazivazy tsy mandratra ihany.
Mivaky toy izao ny hafatra feno navoakan'ilay mpitsongodia “DIGITALRESISTANCE543210VOISTINUPOPOV,” ka ny POPOV dia manondro an'i Alexander Popov, ho injeniera inoana ao Rosia, ireo firenena Sôvietika teo aloha ary ireo firenena Eoropeana Tatsinanana ho mpamorona ny radio radio. Nokendrena ny hafatra ho voampita feno tamin'ny 7 mey, izay ankalazaina ao Rosia ho “Andron'ny Radio”.
Tsy vao sambany ny fikafika tahaka izao no nandonana ireo sampan-draharahan'ny governemanta rosiana. Araka ny notaterin'ny Roem.ru, tamin'ny taona 2012, rehefa nosakanan'ny mpanome tolona finday iray ny tranonkala iray, dia nanova ny DNS-ny ny tompon'ny tranonkala ka nampidiriny tao ny tranonkalan'ny minisiteran'ny fitsarana rosiana, ka dia voasakana ihany koa io voatonona farany io.
Vao haingana ihany koa ny tranonkalan'ny Rosprirodnadzor, Servisy Federalin'i Rosia Misahana ny Fanarahamaso ny Loharanonkarena Voajanahary, no nisy nisovoka ary dia nampiseho hafatra pro-Telegram. Other government websites Manana ny faharefoany ireo tranonkalan'ny governemanta hafa ka mety hisy hanararaotra hamerina izany fanao izany.
Raha toa manao kapo-batana amin'ny fomba fanakanana ny Roskomnadzor nefa mahay manararaotra izay tsy voajery naterak'izany ny mpanohitra azy, dia miharihary fa hitoetra ho tsilo manindrona ho an'ny governemanta rosiana ny “Digital Resistance”.